काठको रातो बाकसमा दाजुभाइ, अन्तिम विदाइमा प्रवासी नेपाली भावविह्वल ! - VOICE OF NEPAL
६ माघ २०७६, सोमबार ०२:०५
1105 ??? ???????
– छविलाल बगाले, पोर्चुगल ।
पोर्चुगलको राजधानी लिस्बनस्थित फुनारियो क्यापोस साउजोसे अस्पताल । अस्पतालको एक कोठामा लस्करै राखिएका काठका बाकस । त्यहाँभित्र भर्भराउँदो अनुहार भएका एकै कोखका दुई दाजुभाइ । हेर्नेकाे मन नै काँप्ने याे दृश्य शब्दमा वर्णन गर्न कसरी सम्भव हाेला र !
पोर्चुगलका नेपाली समुदाय भावविह्वल
‘हामी याे गतिले बिरानाे माटाेमा मर्नका लागि पैसा तिरेर आएका रहेछौं,’ सविनाले आँसु झार्दै भनिन्, ‘३० हजार नेपाली भएको पोर्चुगलमा ढिलागरी घटनाको जानकारी आयो । यो भन्दा नरमाइलो र दुखद् विषय के हुन सक्छ ?’
यता, धादिङ घर भएका चिजकुमार तामाङ पनि घटनाबारे बताउँदै गर्दा भावुक भए । उनी यस्ता घटनाप्रति आम नेपाली समुदाय चनाखो हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
छालले उडायाे !
पार्थिव शरिरमाथि अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि अस्पताल पुगेकी सविना मनाङथेन तामाङ अस्पतालको एक छेउमा बसेर बलिन्द्रधारा आँसु खसाल्दै मृतक दाजुहरुलाई सम्झिएर भक्कानिँदै थिइन् । उनले प्रवासमा आफन्तको निधनले स्तब्ध बनाएको बताइन् ।
माछा मार्ने क्रममा सामुन्द्रिक छालले बगाएर दुई दाजुभाइको निधन भएको जानकारीमा आएको मावलीतर्फका भाइ कुमार बहादुर तामाङले बताए ।
‘कमललाई छालले बगाएको र भाइ सुरजले दाइलाई बचाउन समुन्द्रमा हाम फालेको भन्ने जानकारी आएको छ । प्रत्यक्षदर्शी हामी नभएकोले घटनाको कारण यही हो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन्,’ उनले भने, ‘हामीले पनि पोर्चुगलस्थित संचारमाध्यमबाट थाहा पाएका हौं । माछा मार्न गएको स्थान अन्यभन्दा अलि खतरा नै रहेछ ।’
पोर्चुगलका नागरिक पनि घटना भएको क्षेत्रलाई अलि खतराको रुपमा हेर्ने गर्दछन् ।
रोजगारीको सिलसिलामा युरोप छिरेका उनीहरु केही समय डेनमार्कमा बसेका थिए । डेनमार्क बसाइपछि गत मे महिनामा मात्रै पोर्चुगल आएका वाइबा दाजुभाइले कास्काइसमा एभरेष्ट करी हाउस सञ्चालनमा ल्याएको भाइ कुमार बताउँछन् ।
मृतकमध्ये कमलका चार र सुरजका तीन छोराछोरी छन् । उनीहरु अहिले काठमाडौंमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन् ।
मृतक दाजुभाइको शवलाई नेपाल पठाउन तामाङ समुदाय, एनआरएनए पोर्चुगल र अन्य नेपाली समुदाय आर्थिक संकलनमा जुटेका छन् । मृतकको शवलाई नेपाल पठाउने र आर्थिक सहयोग संकलनको जिम्मा एनआरएनए पोर्चुगलले लिएको छ । स्रोतका अनुसार एक/दुई दिनभित्रै शव नेपाल पठाउने तयारी छ ।
आठ महिनाअघि मात्रै पोर्चुगल आएका वाइबा दाजुभाइको अस्थायी बसोबासका लागि सबै कागजी पक्रिया पूरा भइसकेको थियो ।
स्मरण रहोस्, पोर्चुगलमा २०१० यता विभिन्न कारणबाट ३२ नेपालीको ज्यान गएको तथ्यांक छ ।